Wararka Maanta: Jimco, Jun 14, 2013-Nin Somali ah oo Magaalada St. Louis ee dalka Mareykanka ku dilay Saddex oo ay shaqo ka dhexeysay, isagiina uu is-dilay
Ruuxan toogtay saddex qof ee ragga iyo dumarka isugu jiray ayaa la xusay in qaarkood ay doonayeen inay shirkad wada-furtaan, balse uu si lama filaan ah u toogtay iyagoo ku sugan goobtii laga furi lahaa xarunta ganacsi shalay oo Khamiis ahayd.
Fu’aad Maxamuud Sheekh oo ay wada dhasheen wiilka falkan lagu dilay ayaa u sheegay VOA-da in ninka wax toogtay iyo walaalkiis iyo labada qof ee dumarka ah uu muran ka dhexeeyay.
“Waxaa jiray maalmahan muran ku saabsan furitaanka xarunta ganacsi oo u dhexeeyay walaalkey iyo ninka wax dilay, xarunta ganacsiga waxaan anigu ku daray lacag, dhowr jeer ayuuna walaalkey is soo wacay si aan goobtaas u furo, balse waxaa i soo gaaray warkan nasiib-darrada ah,” ayuu yiri Fu’aad oo sheegay in booliisku ay weli baaritanano wadaan.
Kabtan Michael Sack oo ka tirsan booliiska magaalada St. Louis ayaa isaguna sheegay in qofka wax toogtay uu is-dilay, wuxuuna sheegay in dadka goobta ku dhintay ay isugu jireen laba rag ah oo uu ku jiray ninkii wax dilay oo isna is-toogtay iyo laba dumar ah.
Sidoo kale, Fu’aad ayaa sheegay in walaalkiis uu deggenaa gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka uuna halkaas dhawaan ka yimid si uu u furo ganacsigan cusub, isagoo sheegay in ninka wax toogtay u qabay mid ka mid ah haweenka la toogtay habar-yarteed.
Falkan wuxuu argagax weyn geliyay dadka Soomaalida ah iyo dadka kale ee Mareykanka ah ee deggenaa magaaladaas, iyagoo ku tilmaamay fal fool xun oo aad looga naxo.
Waa markii ugu horreysay oo ruux Soomaali ah oo ku nool Mareykanka uu ku kaco falkan oo kale, iyadoo booliiska magaaladaas aysan weli soo saarin wax warbixin ah oo ku saabsan magacyada dadka la dilay iyo sababta keentay in ninkan is-toogtay uu falkan u geystay.